Ahoana ny famoahana sary amin'ny Instagram avy amin'ny ordinatera
Instagram dia tambajotra sosialy malaza amin'ny famoahana horonan-tsary sy sary, mikendry hampiasa smartphones mihazakazaka ny iOS sy Android rafitra fiasa. Indrisy anefa fa tsy namorona andian-dahatsoratra an-tserasera ny mpandraharaha izay mamela ny fampiasana manontolo ny endriky ny Instagram.
Ny fomba hanovana ny fiteny amin'ny Instagram
Instagram dia serivisy sosialy fanta-daza manerantany izay atolotra amin'ny serasera marobe. Raha ilaina, ny fichier amin'ny teny Instagram dia afaka miova mora amin'ny hafa. Fanovana ny teny ao amin'ny Instagram Afaka mampiasa Instagram avy amin'ny ordinatera, amin'ny alàlan'ny tranonkala, ary amin'ny alalan'ny fampiharana ho an'ny Android, iOS sy Windows.
Ahoana no hanokafana ny Instagram profile
Atombohy amin'ny Instagram. Ao amin'ny zoro ambany ambany, sokafy ny tabilao mombamomba anao. Ao amin'ny faritra havanana ambony, tsindrio ny bokotra menu. Ao amin'ny faran'ny varavarankely, sokafy ny fizarana "Settings". Ao amin'ny fizarana "Privacy sy Security", sokafy ny lisitra "Account Privacy". Avadiho eo akaikin'ilay mari-trano "Closed Closed" ny toerana misy ny mombamomba azy.
Ahoana no hanafenana sary ao amin'ny Instagram
Ireo mpampiasa Instagram matetika dia mila manafina ny sasany na ny sary rehetra ao amin'ny profil misy tambajotra sosialy. Ankehitriny dia heverintsika ny fomba rehetra hanaovana izany. Afeno ao amin'ny Instagram ny sary Ireto misy fomba hafa dia samy hafa, fa samy ilaina ny toe-javatra tsirairay. Fomba 1: Afeno ny pejy Amin'izay ny bokinao izay napetraka amin'ny kaontinao dia ho hitan'ny mpiserasera anao fotsiny, fa ampy ny manakatona ilay pejy.
Ahoana ny famerenana ny tenimiafina ao amin'ny Instagram
Password - fitaovana fototra amin'ny fiarovana ny kaonty amin'ny sehatra samihafa. Noho ny fisondrotan'ny fangalarana an-tsoratra, maro ireo mpampiasa dia mamorona tenimiafina manjavozavo izay, indrisy, fa ho adino haingana. Haverina eto ambany ny fampodiana ny tenimiafina amin'ny Instagram. Ny famerenana ny tenimiafina dia fomba iray izay hamela anao hamerina ny tenimiafina, avy eo dia afaka mametraka fanalahidy vaovao ny mpampiasa.
Ahoana ny fomba tsy hanoratanao ny mpampiasa ao amin'ny Instagram
Mba tsy hanadino ireo pejy mahaliana, dia manoratra azy ireo izahay mba hanaraha-maso ny famoahana sary vaovao ao anaty sakafo. Vokatr'izany, ny mpampiasa Instagram tsirairay dia manana lisitry ny mpizara izay manara-maso ny asa atao. Raha toa ka tsy tianao ny hampiditra anao na ilay mpampiasa anao dia azonao atao ny manakana azy tsy hanoratra azy.
Ahoana ny fampiasana Instagram
Angamba, ao amin'ny Instagram dia naheno ny mpampiasa smartphone rehetra. Raha vao nanomboka nampiasa io serivisy io ianao dia azo antoka fa manana fanontaniana maro ianao. Ity lahatsoratra ity dia ahitana ireo mpampiasa malaza indrindra momba ny asan'ny Instagram. Androany, Instagram dia tsy fitaovana fotsiny amin'ny famoahana sary, fa fitaovana tena ilaina amin'ny karazam-pifandraisana malalaka, izay novolavolaina miaraka amin'ny vaovao farany.
Ahoana ny fijerena ny tantara amin'ny Instagram
Ireo Instagram ara-sosialy mpanome tolotra aterineto dia manampy mandrakariva ireo loko vaovao sy mahaliana izay mampiasa ny serivisy ho amin'ny ambaratonga vaovao. Amin'ny ankapobeny, volana maromaro lasa izay, miaraka amin'ny fanavaozana manaraka ny fampiharana dia nahazo "Tantara" vaovao ny mpampiasa. Androany dia hijery ny fomba fijerin'ny tantara amin'ny Instagram.
Nahoana aho no tsy afaka manoratra anarana amin'ny Instagram
Fa maninona ny Instagram no mifamaly
Instagram nandritra ny taona maromaro dia mbola anisan'ny iray amin'ny fampiharana maimaim-poana indrindra amin'ny finday. Mampalahelo fa indraindray ireo mpampiasa dia mitaraina momba ny asany tsy mety. Amin'ny ankapobeny, androany dia hijery akaiky ireo antony mety hisy fiantraikany amin'ny fialàn'ny fampiasa Instagram.
Ahoana no hametrahana Instagram amin'ny ordinatera
Androany, Instagram dia heverina ho iray amin'ireo tambajotra sosialy malaza manerana izao tontolo izao. Ity tolotra ity dia ahafahanao mamoaka sary sy lahatsary kely, mizara fotoana misy ny fiainany. Eto ambany eto ny momba ny fametrahana Instagram amin'ny solosainao. Ireo mpikarakara an'ity sampan-draharaha sosialy ity dia mametraka ny taranany ho toy ny tolotra sosialy izay natao manokana ho an'ny smartphones mihazakazaka ny iOS sy Android rafitra fiasa.
Ahoana no hamoahana ny Instagram
Raha mampiasa Instagram ianao fa tsy fitaovana hamoahana ny sarinao manokana, fa toy ny fitaovana entina hampiroborobo ny vokatra, ny serivisy, ny tranokala, dia azo antoka fa ho betsaka ny mpampiasa maro afaka mianatra momba ny mombamomba anao noho ny fahafahana mamoaka dokambarotra. Ireo mpampiasa manomboka ny fampiharana Instagram amin'ny alàlan'ny efijery smartphone, amin'ny ankapobeny, dia manomboka mijery ny famandrihana vaovao, izay miforona amin'ny lisitry ny famandrihana.
Ahoana ny fandefasana hafatra amin'ny Instagram amin'ny solosaina
Fomba 1: Mampidira fanehoan-kevitra amin'ny Instagram avy amin'ny ordinateranao Soa ihany fa raha mila mandefa hafatra amin'ny mpampiasa iray ianao amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra, dia azonao atao ny miatrika an'io asa io amin'ny fampiasana ny Instagram amin'ny tranonkala web izay azo ampiasaina amin'ny browser rehetra. Mandehana any amin'ny pejin'ny Instagram web izany ary, raha ilaina, avelao.
Ahoana ny fomba hamahana ny mpampiasa amin'ny Instagram
Tahaka ny amin'ny tolotra sosialy hafa rehetra, Instagram dia manana anjara amin'ny fanakanana kaonty. Io fomba fanao io dia ahafahanao miaro ny tenanao amin'ireo mpampiasa tsy mana-namana izay tsy tianao hizarana ny sarin'ny fiainanao. Ny lahatsoratra dia handinika ny toe-javatra mifanohitra amin'izany - rehefa mila manakana ny mpisera iray efa taloha ianao.
Ahoana ny fijerena ny mombamomba azy manokana amin'ny Instagram
Olona an-tapitrisany maro manerana izao tontolo izao no maka ny smartphone ary manomboka ny app Instagram. Ho an'ireo mpampiasa maro, ity serivisy ity dia lasa iray amin'ireo tambajotra sosialy fototra izay ahafahanao miara-mizara isan'andro ny fotoana mahafinaritra na mahaliana anao eo amin'ny fiainanao. Saingy lavitra ny sarin'ny olona izay liana amin'ny fahafahantsika mahita - matetika no mihidy ny pejy.
Ahoana ny fanamarihana mpampiasa iray amin'ny sary ao amin'ny Instagram
Rehefa mamoaka sary amin'ny Instagram, dia nalaina sary ireo namantsika sy olom-pantatra, izay mety ho mpampiasa an'ity tambajotra sosialy ity ihany koa. Nahoana àry no tsy miresaka ny olona manatrika eo amin'ny sary? Ny fanamarihana ny mpampiasa iray ao amin'ny sary dia ahafahanao manampy rohy mankany amin'ny mombamomba ny pejin'ny profil.
Fomba hitadiavana sary amin'ny tenifototra Instagram
Mba hanamoràna ny fikarohana sary photos, Instagram dia manana fikaroham-peo ho an'ny tenifototra (tags) izay naseho teo aloha teo amin'ny famaritana na ny fanehoan-kevitra. Ho amin'ny antsipirihany momba ny fikarohana ny tenifototra ary horesahina etsy ambany. Ny tenifototra dia marika manokana ho an'ny tatitra iray mba hametrahana sokajy manokana ho azy.
Ahoana ny fanovana ny tenimiafinao ao amin'ny Instagram
Password - iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fiarovana ny kaontinao amin'ny Instagram. Raha tsy sarotra be izany, tsara raha mandany minitra vitsy ny fametrahana fanalahidy vaovao. Fanovana ny tenimiafina amin'ny Instagram Afaka manova ny tenimiafina ao amin'ny Instagram ianao na amin'ny alàlan'ny tranonkala web, izany hoe amin'ny alalan'ny navigateur, na amin'ny alalan'ny fampiharana ofisialy.
Ahoana no haka sary amin'ny Instagram
Matetika, mpampiasa Instagram no mahita lahatsoratra mahaliana izay tiany hovonjena amin'ny ho avy. Ary ny fomba mora ahafahana manao izany dia ny mamorona pikantsary. Raha ny fitsipika, ny filàna ny maka sary dia misy tranga izay tsy ahafahana maka sary fotsiny avy amin'ny Instagram, ohatra, rehefa hijery tantara na mivantana.
Ahoana no ahafantarana hoe iza no tsy voasoratra ao amin'ny Instagram
Ho an'ny mpampiasa Instagram maro, ny mpampiasa rehetra voasoratra anarana dia manan-danja, ka lasa mahamenatra izany rehefa manomboka mitombo io isa io. Amin'izao fotoana izao, misy ny fahalianana azo tsapain-kevitra amin'ny fijerena hoe iza marina no nosoratana. Na dia misy olona 50 ihany aza ao amin'ny lisitry ny mpandray anjara, indraindray dia tena sarotra ny mahatakatra hoe iza no tsy voasoratra, ary ity fampahalalana ity dia tsy hiasa amin'ny fitaovana ampiasain'ny Instagram.
https://termotools.com mg.termotools.com © Instagram 2019